Muxuu ku qotomaa heshiiska Masar iyo Itoobiya ay ka gaareen khilaafka webiga Nile? - BBC News Somali
Image caption Biyo xireenka webiga Nile
Dalalka Masar, Sudan iyo Itoobiya ayaa heshiis horudhac ah ka gaaray qeybsiga biyaha webiga Nile oo muddooyinkii dambe ay isku khilaafsanaayeen Masar iyo Itoobiya.
Dowladda Itoobiya ayaa biyaha webiga Nile ka sameysay biyo xireen ay dooneyso in ay ka dhaliso koronto, mashruucaas oo ah biyo xireenka ugu weyn qaaradda Afrika.
Mashruucan ayaa waxaa uu xiisad diblomaasiyadeed ka dhex abuuray dalalka Masar iyo Itoobiya, waxaana Dowladda Itoobiya ay ku kharash gareyneysaa lacag dhan afar bilyan oo doolar.
Dalka Masar oo dadka ku nool ay tiradoodu gaareyso boqol milyan oo qof, dadkiisuna ay intiisa badan ku tiirsan yihin biyaha webiga Nile ayaa walaac ka qabto biyo yaraan ku imaan karta wabiga Nile.
Muranka xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa ayaa markii hore ku saleysnaa in aanan la dhisin biyo xireenka, balse maadaama uu haatan gebogebo yahay, waxay dooda kusoo uruurtay sida uu biyo xireenkaas u buuxsami karo.
Masar waxaa ay haatan doorbideysa in biyo xireenka Itoobiya lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo aan saameyn doonin helitaankeeda biyaha wabiga Nile, halka Itoobiyana ay dooneyso in ay durbo buuxiso biyo xireenka, si ay koronto uga dhaliso.
Labada dhinac oo wadahadal ku yeeshay magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa isku afgartay in heerar kala duwan lagu buuxiyo biyo xirenka marka uu Itoobiya ka da'o roob, Itoobiyana lagula xisaabtami doona sida loo maareynayo biyaha webiga xilliyada abaarta.
Dalalka Masar, Sudan iyo Masar ayaa sanadkii 2018-ka isku afgaran waayay xallinta khilaafka webiga Nile.
Wadahadaladaas oo ay ka qeybgaleen wasiirada arrimaha dibadda iyo saraakiisha sirdoonka islamarkana socday 17 saacadood ayaa lagu guuldaraystay in la xaliyo khilaafkii u dhaxeeya dalalka ee wabiga Nile.
Masar ayaa sheegtay in biyo xireenkan uu saamaynayo helida biyaha Masar iyo Beeraleyda dalkaasi.
Waxa ay Masar sidoo kale ku adkaysanaysaa in ay xaq taariikhi ah u leedahay taasi oo uu u damaanad qaaday heshiiskii la saxiixay 1929 iyo 1959, oo xaq u siinaya Masar 87% biyaha wabiga.